गणतन्त्र: सोच्यौँ के, भयो के ?
बाह्रखरी - मंगलबार, असार ७, २०७३
टाउकोमा ‘कफन’ बाँधेर हामी गणतन्त्रको आन्दोलनमा होमिँदै गर्दा कोही भने हामीलाई ‘बयल गाढा चढेर अमेरिका’ पुग्न खोज्ने भनेर खिसिट्युरी गर्दै थिए । अर्कोतिर सडकमा सुरक्षा निकायको बाक्लो निगरानी र हामीप्रतिको रुखो व्यवहार त छँदै थियो । टियर ग्यास, लाठी, पानीको फोहोरा, पटकपटक पक्राउ र रिहा हुनु आन्दोलनकारीको दैनिकी बनेको थियो । व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडेका आन्दोलनकारी सामु सत्ताको दमन फिक्का साबित हुँदै थियो । अन्ततः १९ दिन लामो ऐतिहासिक जनआन्दोलनका सामु निरंकुश राजसंस्थाले घुँडा टेक्यो र भन्यो – जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको छु । जनताको निरन्तरको बलिदान र संघर्षको परिणाम नेपालबाट २ सय ३८ वर्ष शासन गरेको राजतन्त्र अन्त्य भयो । त्यसको ठाउँमा स्थापना भयो – लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ।
कुकुर अभिनन्दनदेखि जनमत संग्रहसम्म
विसं २०५८ साल जेठ १९ गतेको राजदरबार हत्या काण्डबाट मुलुक स्तब्ध बन्यो । राजा वीरेन्द्रको वंश नाशपछि उनैका भाइ ज्ञानेन्द्र राजगद्दीमा बसे । बिस्तारै उनको महत्वकांक्षा बढ्दै गयो । यसका लागि उनले जननिर्वाचित सरकार, संसद् भंग गरेर सरकार गठन र विघटनको खेल खेल्न थाले । देशमा भने कालोबजारी, महँगी बढिरहेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए – लोकेन्द्रबहादुर चन्द । कालोबजारीको विरोधमा हामीले सरकारविरुद्ध पशुपति क्याम्पसमा किरियापुत्री जुलुस निकाल्यौँ । मुलुकमा एकातिर गाउँगाउँमा माओवादी आतंक थियो भने सहरमा आफैँ शासन गर्ने राजाको महत्वकांक्षाको राप । हामीलाई लागेको थियो – प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने राजसंस्थाको प्रयास विफल नपारी हुँदैन । त्यतीबेला गाउँमा माओवादीविरुद्ध बोल्न जति कठिन थियो त्यसभन्दा बढी जोखिमपूर्ण थियो राजसंस्थाविरुद्धमा बोल्न ।
तर, हाम्रो लोकतान्त्रिक चेतनाले चुप लागेर बस्न दिएन । राजा गाउँगाउँमा स्वागत अभिनन्दन थाप्दै हिँड्न थालेका बेला हामीले पशुपति क्याम्पसबाट भन्यौं – जनताको अधिकार खोस्ने राजा भन्दा गृह रक्षक कुकुर इमानदार भएकाले अभिनन्दनीय छ । हामीले पशुपति क्याम्पसमा सांकेतिक विरोध स्वरूप ‘कुकुरको अभिनन्दान’ गरेर प्रतीकात्मकरूपमा विरोध सुरु गरेका थियौँ । पशुपति क्याम्पस, चाबेलबाट मेरो नेतृत्वमा सुरु भएको यस अभियानले देशव्यापीरूप लियो । देशैभर कुकुर अभिनन्दनको क्रम चल्यो । हाम्रो आन्दोलन सरकारले गर्ने धरपकडसँगै चली नै रह्यो । जति दमन भयो, आन्दोलन थप सल्किँदै थियो भुसको आगोझैं । कुकुर अभिनन्दन गरेको अभियोगमा मलाई पक्राउ गरियो । जतिबेला प्रधानमन्त्री थिए सूर्यबहादुर थापा । थापाको प्रधानमन्त्रीबाट वहिर्गमन भएकै दिन म रिहा भएँ । अन्ततः हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ अब प्रजातन्त्र र राजसंस्थासँगै अघि बढ्नै सक्दैन । बीपी कोइरालाले भन्नुभए झैं राजसंस्थालाई प्रजातन्त्र चाहिँदैन भने हामीलाई पनि राजसंस्था चाहिँदैन भन्ने निष्कर्षसँगै राजसंस्थाको सान्दर्भिकताबाारे बहस चलायौं । सडकमा नारा उराल्यौँ – ‘श्रीपेच हामी जलाउँछौं: देश हामी चलाउँछौँ’ । हामी राजसंस्थाविना देशअघि बढ्न सक्ने निष्कर्षमा हामी पुगिसक्दा पनि हाम्रा पार्टीका नेताहरू दुविधामै हुनुहुन्थ्यो । पार्टीलाई सहमत बनाउनुपर्ने अर्को चुनौती थियो । यसका लागि जनता राजसंस्थाको हैन हाम्रा पक्षमा छन् भनेर पुष्टि गर्नुथियो । गणतन्त्रको बाटोमा प्रष्ट भएकाले हामी अल्मलिएनौं । तत्काल घोषणा गरियो जनमत संग्रहको – राजसंस्था रोज्ने कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । जनमत संग्रहमा अत्याधिक बहुमत लोकतन्त्रका पक्षमा देखियो भने राजसंस्थाको पक्षमा झिनो मतमात्र । चाबहिलबाट नतिजा सार्वजनिक भएपछि देशैभरका गणतन्त्रवादी थप उत्साहित बने । जनमत संग्रह पनि देशब्यापी बन्यो । देशैरभरबाट गणतन्त्रका पक्षमा आएको अभिमतले हामी नारायणहिटीको नाकै मुन्तिर गणतन्त्रको नारा उराल्ने युवा विद्यार्थीको मनोबल बढ्दै थियो । राजा र उनका कारिन्दा सेनाको बुट र पुलिसको लाठीकै भरमा आन्दोलन तह लाग्ने रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए । आन्दोलनका बेला पशुपति क्याम्पस र चाबहिल क्षेत्र तत्कालीन सत्ताको टाउको दुखाइ बनेको थियो । अझ यहाँ नेतृत्व गर्ने हामी त मुख्य निसानामै थियौँ सरकारी दमनको । तर, त्यसले गणतन्त्र स्थापन गर्ने हाम्रो उत्कट अभिलाषालाई रोक्न सकेन ।
सोच्यौँ के, भयो के ?
जतिबेला गणतन्त्रको आन्दोलनमा लागेका थियौँ, धेरैको जिज्ञासा हुन्थ्यो – राजसंस्थाविरुद्ध सडकमा नारा लगाउने साहस कसरी आउँछ ? गणतन्त्र प्राप्तिपछि जनताको जीवनस्तर उकासिने, पैसा नभएका कारण शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित हुनुपर्ने, उपचार नपाएर मर्नुपर्ने, हातमा प्रमाणपत्र बोकेर बेरोजगार बस्नुपर्ने, कोही कुनै ठाउँमा जन्मिएकै आधारमा शासक र शाषित हुने भेदभाव, असमानता र अभावको अन्त्य हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो । त्यही विश्वासको जगमा उठेको आन्दोलनका क्रममा पटक पटक मृत्युसँग लुकामारी गर्दैगर्दा पनि हामी डग्मगाएनौं । गणतन्त्र प्राप्तिपछिका सुनौला दिनको कल्पनाले मन पुलकित हुन्थ्यो । त्यसै त्यसै रगत उम्लिएर आउँथ्यो । सडकमा मर्न तयार भएर उत्रिएका आन्दोलनकारीले मृत्यु जितिसकेका थिए । मृत्यु नै जितिसकेको जनताको उभार संसारको कुन बन्दुक र शासकले रोक्न सकेको छ र ? यहाँ पनि सकेन । सत्ता कब्जाका लागि उठेको माओवादीको बन्दुक र प्रजातन्त्रविरुद्ध उठेको सत्ताको बन्दुकको नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा व्यवस्थापन भयो । बन्दुकले जनता तह लगाउँछु भनेर हौसिएका राजा दरबारबाट विस्थापित भए । बन्दुकको नालबाट राज्यसत्ता जन्माउन हिँडेको माओवादी ‘ब्यालेट’को राजनीति स्वीकारेर वनबाट काठमाडौं आयो ।
नेपाली जनताले २००७ सालदेखि देख्दैआएका सपना, पटकपटक उठेका आन्दोलनको प्रतिफल २०७२ साल असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भयो । गणतन्त्र प्राप्तिपछि देशमा ४ जना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने – पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्राई । संविधान सभामा कम्युस्टि मत निर्णायक हुँदासम्म संविधान सभाबाट संविधान बन्न सकेन । अन्ततः संविधान सभाकै दोस्रो निर्वाचनपछि कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । कांग्रेसकै सभापति सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछिमात्र नयाँ संविधान जारी भयो ।
संविधान कार्यान्वयनमा मधेस केन्द्रित दलहरूले केही प्रश्न खडा गरेका छन् र सम्बोधन गर्ने स्थानमा छन् एमाले अध्यक्ष केपी ओली । तर, उनी समस्या समाधानमा गम्भीर देखिएको छैनन् । लाग्छ, देशमा वादविवाद प्रतियोगिता चलिरहेको छ र उनी प्रथम हुने प्रयासमा तर्कका फूलबुट्टा भर्दै छन् । केहीले शंका व्यक्त गर्दैछन् प्रधानमन्त्रीप्रति – कतै ‘अमेरिका पुगेको बयलगाढा’ अन्तै कतै फर्काउने तयारी त हुँदैछैन ? होइन भने गम्भीर बन्नुपर्ने हो जनताले ज्यानको बाजी राखेर हासिल गरेको परिवर्तन संस्थागत गर्न । मधेसले उठाएको आवाज सम्बोधन गर्न गम्भीर बन्नुपर्छ अब त । भूकम्पले घरवारविहीन भएका भूकम्पपीडितलाई भाषणमा होइन, व्यवहारमै सहायता र पुनस्थापना गर्न इमानदार बन्नुपर्छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले देश थलिएको छ । अवसर खोज्दै दिनहुँ हजारौं युवा विदेशिएका छन् । देशलाई मूर्छाबाट बौराउनु छ । तर, चुट्किलाले देश बौरिँदैन । रोजगारी सिर्जना, उद्योगको स्थापना गर्दै आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र बनाउनुपर्छ ।
विडम्बना, हिजो आफँैले हस्ताक्षर गरेर ल्याएको परिवर्तन फर्काउने चलखेलमा केही संलग्न भएका छन् । संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता कसैबाट ‘बक्सिस’मा प्राप्त भएको होइन । हजारौं नेपालीले रगत बगाएपछि आएको हो । यस तथ्यलाई उपेक्षा गरेर पछाडि फर्कने प्रयास जोसुकैले गरे पनि हाम्रा लागि स्वीकार्य हुनसत्तैmन । कुनै अमुक नेताका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै गलत भनेर परिभाषित गर्ने कोसिस गरिँदैछ । त्यसप्रति युवा विद्यार्थी सचेत र सजग हुन जरुरी छ ।
इमानदारहरूले झन्डा उठाउने बेला
बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो – पार्टीमा सुकिलामुकिला हाबी हुँदै जानेछन् र त्यसविरुद्ध पार्टीका इमानदार नेता, कार्यकर्ताले विद्रोहको झन्डा उठाउनुपर्नेछ । उहाँले पार्टीका सन्दर्भमा भनेको यो भनाइ आज देशका सन्दर्भमा झनै टड्कारो बनेको छ । देशमा जिम्मेवारी लिएकाहरू गैरजिम्मेवार भएपछि इमानदार जनताले विद्रोहको झन्डा उठाउनैपर्छ । नेपाली जनता जसरी सकारात्मक परिवर्तनका पक्षमा, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका पक्षमा जनता उभिए त्यसरी नै आज मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि बढ्दो कालोबजारी, महँगी, भ्रष्टाचार र कुशासन रोक्नका लागि आवाज उठाउने बेला भइसकेको छ । हामीले गरेको आन्दोलन राजाका ठाउँमा कसैलाई राष्ट्रपति , केहीलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउन थिएन । समग्र मुलुकको परिवर्तन, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रुपान्तरणका लागि थियो । तर यहाँ भद्रगोल गरेर प्रतिगामी गोल गर्ने योजना बुनिँदैछ । यसैले आफैँले लडेर ल्याएको गणतन्त्र संस्थागत गर्न हामी युवा विद्यार्थी थप चनाखो रहन जरुरी छ । देशले मागे फेरि एकपटक विद्रोहको झन्डा उठाउन हामी तयार रहनुपर्छ । त्यसो त हामी तयारै पनि छौँ ।
(काफ्ले नेविसंघका नेता हुन् )
मंगलबार, असार ७, २०७३ मा प्रकाशित